Iindaba-Jonga ukuba kutheni ubude bekhadibhodi buguquka.
Jonga isizathu sokuba ubude bekhadibhodi buyehla.
Xa kufikwa kukunqongophala kwamakhadibhodi, abantu abaninzi baya kucinga ngekhadibhodi eyenziwe ngamazinki. Ngapha koko, le nto ayifani nokuguqula. Kuyacetyiswa ukuba kuphandwe kwimiba eliqela enje ngezinto ezingafunekiyo, oomatshini bethayile abodwa, iiflowuthi, oomatshini bokuncamathisela, amabhanti okuhambisa, izileyi zoxinzelelo, kunye necala elingasemva lomgca wethayile ukuhlalutya izizathu nokuzisombulula.
(1) Izinto zokwenza imveliso
Iphepha elinezinki elisetyenzisiweyo kufuneka lihlangabezane nemigangatho yesizwe. Umzekelo, kwiigram ezili-105 zephepha elenziweyo, umenzi wephepha lesiseko kufuneka ahlangane nomgangatho kazwelonke we-B. Uxinzelelo lwendandatho yephepha le-C alonelanga, kwaye kulula ukubangela ukuwa kwenkunkuma.
Umsebenzi wolawulo lomgangatho wefektri nganye yebhokisi kufuneka ubekhona. Inkampani ibeka kuqala imigangatho yequmrhu, emva koko ifuna ukuba umthengisi ayenze ngokuhambelana nomgangatho.
(2) Umatshini wethayile ongatshatanga
Ngaba ubushushu be roller esirhangayo banele? Xa amaqondo obushushu entonga eyenziwe ngamazinki engonelanga, ukuphakama kwamazinki okwenziweyo akwanelanga. Ngokubanzi, inkampani elawulwa kakuhle iya kuthumela umntu ukuba ajonge iqondo lobushushu kuyo yonke indibano (kuyacetyiswa ukuba umntu ophetheyo kwibhoyila enze lo msebenzi). Xa ingxaki yobushushu ifunyenwe, umphathi osemsebenzini kunye nomphathi womatshini baziswa kwangexesha, oomatshini bayaziswa ukuba bajongane nayo, kwaye zonke iisilinda zokulungiselela ubushushu ziyahlolwa kwaye zilungiswe rhoqo ngenyanga.
2) Ukungcola kumphezulu weroli ebotshiweyo.
Phambi kokuba uqalise yonke imihla, irola ebotyiweyo iyacocwa kwaye ihlikihliwe ngeoyile yeinjini elula ukucoca i-slag kunye nenkunkuma kwirolorrated roller.
3) Uhlengahlengiso lomsantsa phakathi kwezidudla kubaluleke kakhulu kwimveliso.
Umsantsa phakathi kwe-gluing roller kunye ne-roller corrugating ngokubanzi xa i-roller corrugating preheated imizuzu engama-30 ukukhulisa ukwandiswa kwe-roller corrugating. Ukutyeba kwephetshana elinobunzima obusezantsi kwinkampani kusetyenziswa njengesikhewu. Kufuneka ihlolwe yonke imihla ngaphambi kokuqala umatshini.
Umsantsa phakathi roller mqengqeleki kunye noxinzelelo mqengqeleki ngokubanzi imiselwe ngokwemeko yemveliso, kwaye kufanelekile elungileyo kufuneka kuqinisekiswe.
Umsantsa phakathi mqengqeleki incence kunye irola roller asezantsi kubaluleke kakhulu. Ukuba ayilungelelaniswanga kakuhle, imilo yenkohliso evelisiweyo iya kuba yinto engagungqiyo, ekunokwenzeka ukuba ibangele ubukhulu obungonelanga.
4) Iqondo lokunxiba kwe-roller incence.
Jonga imeko yemveliso yoluhlu olunamalinki nangaliphi na ixesha, nokuba kuyafuneka ukuyibuyisela. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe i-tungsten carbide roller, kuba uxinzelelo lwayo oluphezulu lunokunciphisa iindleko zokuvelisa. Kwimeko yokusebenza okuzinzileyo, kuqikelelwa ukuba iindleko ziya kubuyiselwa kwinyanga ezi-6-8.
(3) Wela iphepha eliphezulwayo
Sukuqokelela iphepha elininzi elinethayile enye kwiflyover. Ukuba uxinzelelo lukhulu kakhulu, iphepha le-tile elinye liza kudinwa kwaye ikhadibhodi ayizukuxinana ngokwaneleyo. Kuyacetyiswa ukufakela inkqubo yolawulo lwemveliso ekhompyutheni, enokuthintela ngokufanelekileyo izehlo ezinjalo, kodwa ngoku abavelisi abaninzi basekhaya banazo, kodwa abayi kuyisebenzisa, yinkcitho leyo.
Xa ukhetha umenzi wokufakwa kwephepha ebhukwini, makuthathelwe ingqalelo ngononophelo ukuthintela imveliso ukuba ingachaphazeleka kukungeniswa komoya kwi-flyover. Ukuba ukufakwa komoya kwi-flyover kukhulu kakhulu, kulula kakhulu ukubangela ukuba i-corrugation iwe. Nika ingqalelo ukujikeleza kwe-axis nganye, kwaye ujonge ukufana kwe-axis nganye rhoqo kwaye ubeke ingqalelo ngalo lonke ixesha.
(4) Cola umatshini
1) Isiciko sokucofa kwi-roller roller sisezantsi kakhulu, kwaye umsantsa ophakathi kweeroller zokucinezela kufuneka uhlengahlengiswe, ngokubanzi wehle nge-2-3 mm.
2) Nika ingqalelo ekubalekeni kwe-radial kunye ne-axial ye-roller yoxinzelelo, kwaye ayinakuba yi-elliptical.
3) Kukho ulwazi oluninzi ekukhetheni i-touch bar. Ngoku ngakumbi nangakumbi iifektri zikhetha ukusebenzisa uxinzelelo loqhakamshelwano njengezinto zokukhwela (cofa iiroller). Olu luphuculo olukhulu, kodwa kusekho iimeko ezininzi apho abaqhubi kufuneka balungelelanise uxinzelelo.
4) Ixabiso lokuncamathisela akufuneki libe likhulu kakhulu, ukuze kungabikho deformation ye-Lengfeng. Ayisiyo ukuba inkulu iglu, kokukhona kufanelekile, kufuneka sinike ingqalelo kwifomula yokuncamathisela kunye nenkqubo yemveliso.
(5) ibhanti yelaphu
Ibhanti ye-canvas kufuneka icocwe rhoqo kube kanye ngemini, kwaye ibhanti ye-canvas kufuneka icocwe veki nganye. Ngokubanzi, ibhanti ye-canvas ifakwe emanzini kangangexesha elithile, kwaye emva kokuba ithambile, icocwa ngebrashi yocingo. Ungaze uzame ukugcina umzuzu wexesha kwaye wenze ukuba ixesha elininzi lilahleke xa ingqokelela ifikelela kwinqanaba elithile.
Ukulungiselela ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu, iibhanti ze-canvas ziyafuneka ukuba zibe nokungena komoya okuhle. Emva kokufikelela ixesha elithile, kufuneka libuyiselwe. Sukubangela ukuba ikhadibhodi ibe yintsimbi ngenxa yokonga kwexeshana, kwaye inzuzo ingaphezulu kwelahleko.
(6) Ingcinezelo yoxinzelelo
1) Inani elifanelekileyo lezisongeli soxinzelelo kufuneka lisetyenziswe. Ngamaxesha onyaka ahlukeneyo, inani labasasazi boxinzelelo abasetyenzisiweyo lahlukile, kwaye kufuneka lilungelelaniswe ngexesha ngokwendlela eyiyo.
2) Imitha ye-radial kunye ne-axial yomqolo ngamnye woxinzelelo kufuneka ilawulwe ngaphakathi kwe-2 filaments, kungenjalo i-roller yoxinzelelo enobume be-oval iya kugubungela ukubola, okukhokelela kubuninzi obungonelanga.
3) Umsantsa phakathi roller mqengqeleki kunye nembasa eshushu kufuneka ihlengahlengiswe, ishiye indawo yohlengahlengiso oluhle, olunokuthi luhlengahlengiswe ngokobume (ubude) bokubola.
I-4) Kuyacetyiswa ukuba abavelisi beekhathoni basebenzise iipleyiti ezishushu endaweni yokucinezelwa koxinzelelo, ewe, ingqikelelo kukuba inqanaba lokusebenza labasebenzi kufuneka lifikelele kwinqanaba lokusetyenziswa elifunwa zizixhobo ezizisebenzelayo.
(7) Icandelo elingasemva lomgca wethayile
Ukungena nokuphuma kwemela yokusika kufuneka isebenzise izixhobo ezifanelekileyo zelanga. Ngokubanzi, ziidigri ezingama-55 ukuya kwezingama-60 kunye nonxweme lokuhlola ukomelela ukuthintela ukutyumza ikhadibhodi.